Laghachite na Social Media Investment | Martech Zone
Saturday, January 20, 2018 Sunday, Jenụwarị 21, 2018 Douglas Karr
Mgbasa mgbasa ozi nwere nkwa dị egwu dị ka usoro iji zụlite mmekọrịta dị n'etiti onye ahịa ma ọ bụ onye ahịa na azụmaahịa na-enye ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ wụlitere ozugbo n'ụgbọ mana ROI siri ike n'ihi na ọ naghị akwụsị ozugbo ma ọ bụ nweta ego ozugbo.
Tupu ịtọọ usoro mmekọrịta gị maka ihe ịga nke ọma, ọ dị mkpa ịghọta ihe omume na-eme n'ezie ROI na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọ bụ ire ahịa ọdịnaya, nghọta mmadụ, ma ọ bụ ịkwado na ijide mbọ dị ka ọrụ ndị ahịa na-elekọta mmadụ? Salesforce jikọtara ya na Altimeter ka bipụta ọmụmụ na-elekwasị anya na isiokwu a, ROI nke njikwa elekọta mmadụ.
Ihe nchoputa nke nyocha a gosiputara na enwere nloghachi na ntinye ego maka mgbasa ozi ndi mmadu, ma o guzosiri ike site na oru oma na ntozu oke. Ikike dị mkpa n'ihi na ịtọlite ​​usoro mgbasa ozi mmekọrịta na-achọ ntinye na akpaaka maka ịhazi oge, ijikwa, nyochaa, na ịzaghachi ihe omume mgbasa ozi.
A tozuru ntozu iji hụ na e nwere usoro njikwa iji mee ka mmekọrịta gị na mgbasa ozi mmekọrịta gị na-esote ma tụọ mmetụta ya n'ụzọ ziri ezi. N'ezie, ROI nke mgbasa ozi mmekọrịta, dị ka ụlọ ọrụ tụrụ ya net nkwalite akara, okpukpu abụọ na ntozu okè.
Lelee ihe omuma ha, ROI nke Social Media Management, iji ghọta ihe mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-eme ka ROI na-elekọta mmadụ na ọrụ ndị ịchọrọ na ntanetị iji bulie nke ọma.
Tags: laghachi azụmaahịalaghachi na mgbasa ozi mgbasa ozilaghachi na ntinye aka na mgbasa ozi
Usoro mgbasa ozi na ihe mgbaru ọsọ dị iche iche maka azụmahịa ọ bụla. Ọ bụ ezie na ụfọdụ azụmaahịa nwere ike ịchọpụta na mgbasa ozi mmekọrịta bụ ebe dị mma iji jide asọmpi ma ọ bụ bie ego, nke ahụ nwere ike ọ gaghị abụ ụzọ ziri ezi maka azụmaahịa niile. Ọ dị mkpa ịnọgide na-eme ihe njirimara gị.
Jenụwarị 26, 2012 na 4:42 PM
Kpamkpam kwenyere, @nickstamoulis: disqus! Echere m na mgbe ụfọdụ anyị na-elekwasị anya na ROI iji kwado penny ọ bụla na anyị adịghị mkpa. Mgbe ụfọdụ ọ na-adị mma naanị iji nweta aha gị n'ebe ahụ na-enweghị atụ anya na dollar ga-ezo!
Chaị, data ndị a bara ezigbo uru ma na-atọ ụtọ. Daalụ nke ukwuu!
Mgbasa mgbasa ozi bụ otu n'ime mgbasa ozi a ma ama, nke a na-eji ọtụtụ ụbọchị eme n'oge a.